बेबी स्नान - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा पोषण र केयर बच्चा स्नान
जब यो स्प्लाशिंग गर्न आउँछ, बच्चाहरु प्राय: खुशी संग सुप्रभात हुन्छन्। न्यानो गीलामा सानो हातहरू स्प्याश गर्न सक्दछ र मिनी लहरहरूमा गम्मिमेन्ट घुमाउँछ बच्चा स्नान, सानो शिशुहरूले अनुष्ठानलाई प्रेम गर्छन् जब तिनीहरू मासुको तापक्रममा घिमिरे हुन्छन् बेबी स्नान लपेटिएका छन्। टाउकोबाट अनुहारमा, ती साहसीहरू सजिलै धोए र तिनीहरू जंगली खेल्न सक्छन्। दायाँसँग टब त्यहाँ सुरक्षाको एक विशेष वातावरण हो र यो धुलाई खुशी र मजा संग जोडिएको छ।
राम्रो छ कसरी बच्चा स्नान फेला?
पहिलो पटक बच्चाहरु मा न्यानो गर्न सक्छन् बच्चा स्नान छ हप्ता हप्ता पछि। त्यहाँ विशेषहरू छन् धूपदान बच्चाहरु को लागि सामान्य किनकि खरीद bathtubs कम उपयुक्त। बच्चाहरूको लागि मोडेल सजिलो हेरचाह प्लास्टिक प्रदान गर्दछ र प्रायः गैर-पर्ची खुट्टाहरू छन्। यहां सम्म कि गैर-पर्ची दस्तावेजों को मदद संग, मोडेल फर्श या स्नान मा राखन सकिन्छ। छोटो मोडेलहरूले सानाहरूलाई राम्रो महसुस गर्ने राम्रो कारक प्रदान गर्छन्, किनभने तिनीहरू गर्भको सुरक्षित समय सम्झिन्छन्। छोराछोरीहरू पनि एकदम सानो बुझ्न र सानो ठाउँमा राख्न सकिन्छ। यदि तपाइँ आमाबाबुको रूपमा राम्रो पकड चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले विशेष बाथटब इन्सर्टहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ। आमाबाबुको लागि, निस्सन्देह, केही फाइदाहरू छन् र त्यसैले मोडेलहरू सजिलै विभिन्न कोठाहरूमा ढुवानी गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्नान खुशीमा रवैया पछि-अनुकूल छ, उचाइ-समायोज्य टब फ्रेम हो। केही मोडेलले नली को माध्यम ले ठूलो टब मा पानी को ड्रेसिंग को विकल्प प्रदान गर्दछ। साथै खरीदका लागि बेश्याले बोल्छ, ठूला मोडेलहरूको तुलनामा पानी बचत, किनभने क्षमताको बच्चा स्नान के बारे मा 10 लीटर को साथ काफी कम छ।
कठोर bathtubs बच्चाहरु को लागि
सानो टबहरू सामान्यतया बाल-अनुकूल हुन्छन् र स्वादमा आधारित हुन्छन्, छनौट गर्न धेरै फरक रंगहरू छन्। त्यहाँ धेरै क्लासिक रंगहरू जस्तै केटीहरूको लागि गुलाबी वा केटाहरुको लागि निलो छन्। यसको अलावा, तटस्थ रङ पाइन्छ र यति बेज, हरी, पहेंलो वा सेतो। सामान्यतया फेला पर्यो उडनीय मोडेलहरू वा क्लासिक मोडेलहरू कडा प्लास्टिकको बनेका हुन्छन्। क्लासिक मोडेलहरू उच्च गुणस्तर, टाढाको प्लास्टिक बनाइएका छन् र स्थायित्व लामो छ। मा बच्चा स्नान त्यहाँ सामान्यतया दुवै पक्षमा हैंडल गरिन्छ, त्यसैले यातायात मात्र काम गर्दछ। भर्न भइरहेको बेला, यातायात संभव छ। सानाहरू धूपदान सजिलै प्रयोगमा ल्याउन एक कपडाको टोकरी मा सजिलै संग परिवर्तित गर्न सकिन्छ। अक्सर व्यावहारिक अलमारियाँहरू छन् र यो उदाहरणको लागि वाशकोट वा साबुन। डिलिजन सजिलै संग काम गर्न को लागि, त्यहाँ निकास नली संग नाली प्लग छ। केहि अवस्थामा, सहज मोडेलहरू भेटिए, जुन ergonomically आकार हो र यसरी मोडेलहरू दुवै पक्षहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बच्चाहरु को लागि एक पक्ष मा एक recessed सीट छ र नवजात को लागि एक अर्को पर्ची मा एक विरोधी पर्ची ओवरले छ। आमाबाबुको लागि, व्यापक, सहज आर्मेस्ट अक्सर प्रायः उपलब्ध छ र यसैले बच्चाहरु धेरै सजिलो हुन्छ। केही निर्माताहरूले मोडेलको लागि उपयुक्त अपरान्त्र प्रदान गर्छन्, ताकि धुलाई पछाडि सुक्छ र ईमानदार, ergonomically राम्रो स्थितिमा गरिन्छ। प्रायजसो आकारको धूपदान उदार र यसैले 90 सेन्टमिटर सम्मको लम्बाइ फेला पर्यो। 12 महिना सम्म बच्चाहरु र नवजात शिशुहरुको लागि, एक क्लासिक टिल प्रकार उपयुक्त छ।
नरमहरू bathtubs बच्चाहरु को लागि
यो पनि inflatable बच्चा स्नान धेरै लोकप्रिय छ। तालहरू भरिएको र नरम हुन्छ। यो मोडेल विशेषतया संवेदनशील टाइलका लागि उपयुक्त छ। बाथटबको लागि, मोडेलहरू प्रायः धेरै ठूला हुन्छन्, किनभने चौडाइ 64 सेन्टमिटर सम्म हुन्छ। एक हेम हावा पंप संग, मोडेल सजिलै संग र सजिलै संग फट्याउन सकिन्छ। उनीहरूको कम वजनको लागि धन्यवाद, मोडेलहरू सबै ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ र यातायात सजिलो छ। जब फुटेको छैन भने, मोडेलहरू यात्रा गर्दा वा घरमा राम्रो तरिकाले ठोक्न सकिन्छ। Inflatable बच्चा स्नान चोटको एक धेरै कम जोखिम सुनिश्चित गर्दछ किनभने कुनै कठिन भित्ता र किनारहरू छैनन्। यो ध्यान दिनुपर्छ, तथापि, कि शिशुहरूले पनि यसमा कम समर्थन पाउँछन्। केहि मोडेलहरू एकीकृत सीटसँग आउँछ, जुन बच्चा र उमेरको आधारमा हटाउन सकिन्छ। फ्लोरिडा उठाइन्छ र नरमले ठोक्किएको छ र यसैले साना व्यक्तिहरूको लागि राम्रो स्नान सुविधा हो। कुनै हावाबाट मोडेलहरू बचाउँछन् किनभने त्यहाँ चेक वाल्व हो। पानीको जलविद्युत् आयोजनाको साथ धूपदान धेरै सजिलो र छिटो खाली बरु 12 महिना भन्दा बच्चाहरु को लागि, inflatable मोडेल उपयुक्त छ र बच्चा को लंबा छ, मोडेल पनि एक paddling पूल को रूप मा उपयोग को लागि खुशी हो।
सुरक्षा र सफाई स्नान
के हुनेछ बेबी स्नान त्यसपछि, केही सुझावहरू र नियमहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तिनीहरू मोडेलमा हुँदा बच्चाहरू आफ्नो हात र आँखाबाट बाहिरिनु हुँदैन। त्यसो कि बच्चाहरुसँग आवश्यक पर्ख छ र यसरी फिसाउन रोक्न, स्नान स्नान वा विरोधी पर्ची सम्मिलित हुन्छन्। आदर्श अवस्थामा, इष्टतम बेबी स्नानको तापमान 37 डिग्री हुनुपर्छ। को बच्चा स्नान सबै भन्दा राम्रो राखिएको छ ताकि बच्चाहरुको लागि ट्याप पुग्न सकेन। के हुनेछ बच्चा स्नान सफा गरियो, त्यसपछि सामान्यतया किनारमा एक निरंतर स्नेहन फिल्म हुन्छ। यो स्नेहक फिलिम बच्चाहरु को लागि स्नान तेल द्वारा बनाईएको छ। लसमसेल, साबुन अवशेष वा तेलको भण्डार जस्ता प्रदूषकहरू रोगहरु र जीवाणुहरूको लागि प्रजनन क्षेत्र हो। टब सतह संवेदनशील छ र यसैले आक्रामक, पारंपरिक बाथरूम क्लीनर उपयुक्त छैन। बरु उपयुक्त हो कि मोटो-भंग र हल्का डिशभिजन डिटर्जन्टहरू र उबलते पानी पनि थपिएको छ। यदि यो पर्याप्त छैन भने, त्यसपछि उपचारका लागि सिट्रस सारको पतला सिरका त्यहाँ छ। पछि, स्नानहरू सधैं राम्रो देखिन्छन्।
बच्चाहरु को लागि सानो मोडेलहरू के हुन्?
टोडलरहरू स्प्ल्याउने र ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला ठूला मानिसहरू हुन्छन्। अभिभावकहरूसँग सफल भए बच्चा स्नान सुरक्षा को वातावरण र यो बाथरूम देखि एक राम्रो अनुभव हुनेछ। नवजात शिशुहरू सधैं बिस्तारै माथिल्लो तलबाट धोईनुपर्छ। आमाबाबुको लागि बेबी स्नान पनि फायदेमंदको कारणले यो बच्चाहरु संग गहन संपर्क प्राप्त गर्दछ। बाल पानी बच्चाहरु को शरीर को किनारा मा चलािन्छ र साना शरीर को ठंडा छैन, स्नान को5मिनेट पर्याप्त छन्। नुहाउन पछि, शिशुहरू न्यानो स्नान तौलिएमा लिपिबद्ध हुन्छन्। बच्चाहरु यस्तो स्नान पछि वास्तव मा राम्रो लाग््छ। सही तापमान को बारे मा 37 डिग्री सख्ती देखि मनाईयो र एक प्लग को साथ, तापमान को जाँच गर्न सकिन्छ। यदि कुनै प्लग छैन भने स्नान थर्मामीटर प्रयोग गर्न सकिन्छ। निकास नलीसँगको मोडेल धेरै सजिलो हुन्छ किनकि सफाई सरलीकृत हुन्छ। नली कुनै पनि समस्या बिना माउन्ट गर्न सकिन्छ र स्नान पानी बन्द हुन्छ। Inflatable मोडेल कम वजन संग सहमत र कुनै हावा भाग्न सक्दैन। चूंकि मुद्रास्फीति मोडेल सजिलै संग स्थानांतरित गरिन सक्छ, एक ठाँउ हरेक ठाँउ र चाँडै काम गर्दछ। संयोग, त्यहाँ पनि तहयोग्य मोडेलहरू छन् र यो स्थिर मोडेलको रूपमा लगभग लचीला हुन्छन्। मोडेल ठाउँ र कम्पैक्ट सुरक्षित गर्न तहमा राख्न सकिन्छ। धेरै आमाबाबुले अन्ततः महत्त्वपूर्ण छन् बच्चा स्नान स्नान खुशी पछि सम्भव हुन सकेन सानो ठाउँको रूपमा।
प्रकार्य र डिजाइनको bathtubs
प्राय: मोडेलहरू फ्रेममा प्रश्नको साथ आउँछन्। यी मोडेलहरू शक्तिशाली छन् र सेट अप गर्न सजिलो छ र यो कसरी खडा छ स्नान त्यसपछि अक्सर ध्रुवीय रैकमा। किनभने रबड गरिएको खुट्टाहरू छन्, मोडेलहरू गैर-पर्ची र गैर-झुकाउने छन्। तलको तल तल सजिलै सँग जोड्न सकिन्छ। यदि साबुन ट्रे को एकीकृत हुन्छ, तब पनि आवश्यकता को स्नान बर्तन संग्रहित गर्न सकिन्छ। थर्मामीटर, एक खिलौना वा स्पंजको लागि कोठा छ। एक पटक फेरि स्नान र धुलाई सरलीकृत गर्न सकिन्छ। धेरै मोडेलहरू ergonomically आकारमा छन् र त्यहाँ केवल असाधारण आकारहरू छन्, तर आधुनिक डिजाइन पनि। सामग्री सामान्यतया उच्च गुणस्तर र स्थिर हुन्छन्। मोडेलहरू मात्र टिकाऊ छैनन्, तर बच्चाहरूका लागि उच्चतम सुविधा हो।
सही मोडेल खोज्नुहोस्
बच्चाहरु लाई सानो मोडेलहरुमा अपेक्षाकृत छिटो देखिने को अनुमति दिइएको छ र सुरुमा बच्चाहरुको छाला धेरै संवेदनशील छ कि हफ्ते एक पल्ट वा दुई पल्ट पर्याप्त छ। महत्त्वपूर्ण छ कि स्नानमा बच्चा स्नान दस मिनेट भन्दा बढी छैन। छालामा, अम्ल पोथी अझै स्पष्ट छैन र अधिक लगातार सफाई पछि केहि महिना पछि काम गर्दछ। बच्चाहरु को लागि सामान्य मोडेल अनुपयुक्त पछि, त्यहाँ एक विशेष छ बच्चा स्नान, साना मोडेलहरू धेरै हल्का हुन्छन् र यसले गर्भमा समयको शिशुहरूलाई सम्झाउँछ। आमाबाबुले फाइदा उठाउनुभएको छ कि बालबालिकाहरुलाई सजिलो बनाउन सजिलो हुन्छ र मुद्रा ब्याच मैत्री हुन्छ। लाइट मोडेल बाथरूम वा बदलिने कोठामा प्रयोग गरिन्छ। को एक सरल संस्करण हुनेछ बच्चा स्नान वांछित, तब यो सामान्यतया उपफ्रेम बिना पाइन्छ। सँधै अन्तरिक्षमा ध्यान दिनुहोस् जहाँ व्यक्तिगत मोडेलहरू सेट अप गर्न सकिन्छ। राम्रो मोडेलहरू महँगो हुनु हुँदैन र प्रायजसो लक्जरी मोडेलको सुविधाहरू संग वितरण गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो आवश्यक छ कि सामाग्रीले कुनै पनि प्रदूषकलाई पनि सुनिश्चित गर्दैन। मा बच्चा स्नान कुनै पनि दरमा, मोडेलहरू बच्चाहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको छ, र आमाबाबुसँग पनि तिनीहरूको लागि केहि छ। प्रायः ह्यान्डलहरू लिइरहेका छन् र पनि नाली प्लगले जीवनलाई सजिलो पार्न सक्छ। साना मोडेलहरूमा कम वजन र एक सानो व्यास छ। को सानो मोडेल बच्चा स्नान उमेर-उपयुक्त आकार प्रदान गर्नुहोस्, व्यावहारिक हैंडलिंग र लचीला प्रयोग।
अघिल्लो लेखस्तन पंप
अर्को लेखबेबी स्विंग